IiApartments zeNkonzo ezilungele usapho - I-Airbnb
IiApartments zeNkonzo ezilungele usapho
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguRajapandy
IRoyal Stay yayiyilwe njengendawo yangoku ephezulu yomgangatho ophakathi wenkonzo yeeApartments.Eyokuqala iseGomathipuram, eyesibini ikwiRoyal Garden kufutshane neSibhedlele saseVikram [Ring Road] kwaye eyesithathu i4500 sq.ft bungalow ibekwe kufutshane nendlela yeSivagangai kunye neTuticorin. Indawo ekudibanela kuyo indlela ejikelezayo .Zontathu ezi zakhiwo ziza kubonelela ngentuthuzelo, ucoceko kunye "nokuziva-njengekhaya" kwaye zikwiSithili esixakekileyo eMadurai, eTamil Nadu, eIndiya.
Ukuhlala kwakho kuya kuba yinto ekhethekileyo kwaye ibe ziinkumbulo.
3.90 · Izimvo eziyi-10
Umbuki zindwendwe ngu- Rajapandy
Umphathi wethu wobudlelwane kunye nomnakekeli baya kufumaneka ukunceda kunye nokukhokela iindwendwe zethu.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 08:00 - 10:00